UYIFUMANA NJANI ILAYISENSI YOMTSHATO YASE-IOWA KWAYE UCWANGCISE UMTSHATO WE-IA - UKUHAMBA
Eyona Ukuhamba Ungatshata njani ngokusemthethweni e-Iowa kwaye ucwangcise umtshato wakho we-IA
Ungatshata njani ngokusemthethweni e-Iowa kwaye ucwangcise umtshato wakho we-IA
Ukucwangcisa usuku lwakho olukhethekileyo kwiHawkeye State? Sikufumene umva. KELLY CZUPKIEWICZ Ukuhlaziywa kwe-Aug 31, 2021
Ukuba uyonwabile ngomtshato wakho ozayo kwiindawo ezinamathafa kunye namathafa asembalini e-Iowa, amathuba awaphuphi ngenkqubo yelayisensi yomtshato. Kulabo banomdla wokubopha iqhina kwi-Hawkeye State, thatha umoya kwaye uhlale uzolile. Ukufaka isicelo selayisensi yomtshato, ukukhupha indawo efanelekileyo kunye nokuqokelela abathengisi ababalaseleyo kunokubonakala ngathi ngumsebenzi onzima ekuqaleni, kodwa kunokwenzeka ngokupheleleyo. Qiniseka ukuba ucwangcisa ngaphambi kwexesha ukuze ungakhangeli kwimizuzu yokugqibela ukufumana onke amaxwebhu akho ngokulandelelana.
Nje ukuba ubethelele isicelo sakho selayisensi yomtshato, funda indlela yokutshintsha igama e-Iowa ukuba unomdla wokuthatha i-moniker entsha etshatileyo.
Ungatshata njani eIowa
Uchithe iiveki ezimbalwa ezidlulileyo ucinga kakhulu ngesinxibo sabatshatileyo, iindawo ezinokutshata iholideyokugqibela, kwaye ngokuqinisekileyo ulithanda kangakanani iqabane lakho, kwaye ngoku uyothuka kuba uqaphela ukuba awukwenzi naluphi na uphando kwi-nitty gritty yokwenza konke kusemthethweni.
Ngaba likho ixesha lokulinda ukutshata eIowa?
Kuxhomekeka kwindawo oza kutshata kuyo, kukho ixesha lokulinda ukuya kuthi ga kwiintsuku ezi-3 emva kokufaka isicelo sephepha-mvume lomtshato ngaphambi kokuba utshate. Unokufaka isicelo sokurhoxisa ixesha lokulinda ngokuthetha nomgwebi wenkundla yesithili kwaye unike isizathu esinyanzelisayo sokuba kutheni ufuna ukurhoxiswa kwemini ixesha lokulinda.
Zithini iimfuno zomthetho zokutshata eIowa?
Ukubopha iqhina ngokusemthethweni, omabini la maqela kufuneka abe ngaphezulu kweminyaka eyi-18, okanye ngaphezulu kwe-16 ngefom yemvume esayinwe ngumzali okanye umgcini. Izalamane ezinxulumene negazi azinakho ukutshata ngokusemthethweni e-Iowa kananjalo abo baneqabane eliphilayo abangakhange balugqibe uqhawulo-mtshato, kodwa uvavanyo lwegazi aludingeki kwisicelo selayisensi yomtshato.
Ukuze umsitho womtshato wesintu ugqitywe, kufuneka ube namangqina amabini abantu abadala akhoyo kumsitho wakho kwaye usigqibile kwaye usibuyisele isatifiketi sakho somtshato zingaphelanga iintsuku ezili-15 zomsitho lowo. Emva koko, ikopi eqinisekisiweyo yesatifikethi iya kuthunyelwa kuwe. Nobabini neqabane lakho kufuneka nibe khona ngexesha lomsitho wokwenza umtshato ubesemthethweni.
Yintoni ethathwa njengomtshato oqhelekileyo e-Iowa?
I-Iowa lelinye lawona mazwe ambalwa awamkelayo umtshato oqhelekileyo womthetho. Oku kuthetha ukuba ungatshata ngokusemthethweni ngaphandle komtshato wesintu okanye iphepha-mvume lomtshato. Ngethuba nje wena neqabane lakho nihlala kunye, bobabini banomdla wokutshata omnye komnye, kwaye nivakalise esidlangalaleni okanye nazazisa njengesibini esitshatileyo, ndiyavuyisana! Ungatshata kwiphondo lase-Iowa. Ngelishwa, ukuba ukhetha ukuhamba, uninzi lwamanye amazwe aluyi kuqaphela ubuqabane bakho njengomtshato osemthethweni.
Ilayisensi Yomtshato Iowa 101
Uhambe kakuhle usiya ekucwangciseni umtshato wamaphupha akho kwaye inyathelo elilandelayo kukuqinisekisa ukuba yonke into iyahamba ngaphandle kwengxaki. Kulabo banomdla wokubopha iqhina e-Iowa, kuya kufuneka ufumane ilayisensi yomtshato yokwenza yonke into ibe semthethweni. Ukuqalisa inkqubo yesicelo somtshato, kufuneka uqale ungenise amaphepha akho kwiofisi yeerekhodi yerejista okanye kwiofisi yerejistra. Ayinamsebenzi ukuba yeyiphi na indawo ofumana kuyo iphepha-mvume lakho lomtshato ukuba nje uyisebenzisa e-Iowa.
Yintoni oyifunayo ukuze ufumane ilayisensi yomtshato eIowa?
Mhlawumbi elona candelo linzima malunga nenkqubo yesicelo selayisensi yomtshato kukuba kufuna umntu omdala owaziyo omabini amaqela obudlelwane ukuba asibonele isicelo kwaye asisayine kuso. Ingqina akufuneki libekhona, kodwa amaphepha abo kufuneka abhengezwe luluntu olugunyazisayo ukuba abanakubakho ngokobuqu. Ukuba ufaka isicelo ngeposi, sonke isicelo kufuneka sibhalwe phantsi kwaye sibandakanye nentlawulo. Nobathathu (isibini kunye nengqina) kufuneka nize nefoto esemthethweni enikezwe ngurhulumente. okanye iphepha-mvume lokuqhuba xa ufaka ifom yesicelo egcwalisiweyo. Isibini ekujongwe ukuba asidingi kuza nesatifikethi sokuzalwa okanye ikhadi labo lokhuseleko loluntu, kodwa kufuneka bayazi inombolo yabo yokhuseleko lwentlalo.
Ixabisa ntoni ilayisensi yomtshato yase-Iowa?
Ixabisa i-35 yeedola kubahlali base-Iowa kunye nabahlali abangaphandle kukarhulumente ukuba benze isicelo sephepha-mvume lomtshato, kwaye kuxhomekeke kwisithili, sinokwenziwa kokubini ngobuqu nangeposi. Iiofisi ezininzi zedolophu azilamkeli ikhadi lekhredithi, kuphela imali, ke lumka uzise imali eyoneleyo xa ugcwalisa isicelo sakho.
Kuthatha ixesha elingakanani ukufumana ilayisensi yomtshato eIowa?
Ngelixa iphepha-mvume lakho lomtshato liya kukhutshwa kwangoko, kuya kufuneka ulinde ixesha lokulinda ngaphambi kokuba uhambe ezantsi.
Ngaba ungasifaka isicelo selayisensi yomtshato kwi-Intanethi e-Iowa?
Unokufaka isicelo sephepha-mvume lomtshato ngobuqu nangeposi. Nangona kunjalo, kuya kufuneka uthathe ilayisensi yakho yomtshato ngokwakho emva kwexesha elinikiweyo kuba lingenakho ukuthunyelwa ngeposi.
Uyifumana njani ikopi yelayisensi yakho yomtshato yase-Iowa?
Ukuba unomdla wokufumana ikopi eyongezelelweyo yesatifikethi sakho somtshato, unokufaka isicelo kuso kuloo ndawo ufumene isicelo sakho sokuqala somtshato, kwaye kuya kubiza imali encinci eyongezelelweyo.
Uyicwangcisa njani i-Iowa yomtshato
Ngoku ukuba unayo yonke i-nitty gritty ngaphandle kwendlela, lixesha lezinto ezimnandi! Xa ucwangcisa umtshato wakho wase-Iowa, uneqela leendawo ezahlukeneyo onokukhetha kuzo kwaye i-Knot inezinto ezininzi iingcebiso ukukukhokelela kwicala elifanelekileyo. Kuxhomekeka ekubeni unomdla wokubamba umnyhadala okanye umcimbi we-chic, ngokuqinisekileyo uya kuba nakho ukufumana indawo efanelekileyo.
Izixeko ezahlukileyo kunye neeNdawo eziqwalaselweyo ngomtshato wase-Iowa
Ezona zixeko zidumileyo kwimitshato eIowa zezi:
Isipho sesihlanu somtshato kuye
IDes Moines ilikhaya elihle kunye neziko lesixeko elixineneyo. Kukulungele ezo zibini zihamba ngokukhawuleza ezinomdla kwiindawo zanamhlanje kunye nezohlukeneyo. Kwizibini ezitshatileyo ezinomdla wokungasemva onobugcisa obuncinci, iCedar Rapids ikugubungele ngeetoni zezakhiwo zembali nezenkcubeko eziza kuthatha umphefumlo wakho.
Yintoni ekufuneka ujonge kuyo kwindawo yomtshato yase-Iowa
Ngeendawo ezinje ngezidiliya, iiklabhu zelizwe, iindawo ekuchithelwa kuzo iiholide, kunye neziko lemveli, nokuba ungowuphi na umxholo womtshato wakho, i-Iowa iya kuba nendawo efanelekileyo yokwenza umanyano lwakho.
Nangona yaziwa ngombona, ezolimo, kunye nokubamba enye yezona zikhundla zikhulu zikarhulumente kweli lizwe, oko akuthethi ukuba usuku lwakho olukhethekileyo kufuneka lube yinto engaqhelekanga okanye erustic. Ngelixa i-Iowa ineendawo ezintle ezibalaseleyo, unokufumana ngokulula indawo ye-chic kunye nendawo xa ufuna into encinci-emnyama.
Indlela yokufumana abathengisi bomtshato baseIowa
Nje ukuba ubambe indawo yamaphupha akho, jonga kwindawo yentengiso yomthengisi wethu womtshato ukucwangcisa usuku lwakho. Xa kufikwa kwizacholo, iikeyiki, ukutya kunye nokuhombisa, i-Iowa ikukhusele, nokuba ucwangcisa umtshato owahlukileyo ngomxholo ongqongqo. Ngokhetho oluhle, olumnandi, oluqhelekileyo kunye nolunqabileyo, awuyi kuba nangxaki ekufumaneni abathengisi abagqibeleleyo kuhambo lwakho ezantsi kwendlela.
Elona Xesha liNyaka lokuba noMtshato wase-Iowa kwimozulu entle
I-Iowa inokuba namaxesha athile obunzima, ke ukubopha iqhina ebusika okanye ihlobo asiyonto eyomileyo. Intwasahlobo nokuwa ngawona maxesha athandwayo kwizibini ezonwabileyo ukuhamba ezantsi, kuba ubusika bunokubona ikhephu elinzima kwaye ihlobo lihlala lifumana imvula enkulu. Kuxhomekeka ekubeni unethemba lomtshato ongaphakathi okanye ongaphandle, kubalulekile ukuba ucwangcise malunga namaxesha onyaka ukuze uqiniseke ukuba iphupha lakho lasehlotyeni soirée alizukujika libe liqela lomtshato elixineneyo phantsi kwesambulela esinye kwindudumo.
Izimvo zezipho zekrisimesi zomfazi
iingoma zomtshakazi zokuhamba ezantsi kwendlela
eyona nyanga idumileyo yokutshata